नवयुग राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिर ! | Hamro Khelkud
नवयुग राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिर !
काठमाडौं – पूर्ण रुपमा फिट नभएपछि फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठ अर्को महिना हुने एएफसी एसियन कप छनोटको पहिलो लेगमा राष्ट्रिय टोलीमा उपलब्ध नहुने भएका छन् । नेपाली टोलीका जापानी प्रशिक्षक ग्योतोकु कोजी र फिजियो राजु दहालको सल्लाहमा नवयुगले बुधबारबाट राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षण जान छोडिसकेका छन् ।
गत बर्ष बंगलादेशमा बंगबन्धु गोल्डकप र भारतमा भएको १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण पदक दिलाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेका नवयुग यसपटक फिलिपिन्सविरुद्ध भने टोलीमा हुने छैनन् । कोजीले बिहीबार पहिलो चरण छनोट गर्ने सम्भावना रहेको छ । नेपालले चैत १५ गते फिलिपिन्ससँग पहिलो लेग खेल्दैछ ।
‘घुँडाको पट्टी खोलेपछि सामान्य अभ्यास सुरु गरिसकेको थिए,’ नवयुगले भने,‘तर विथ बल ट्रेनिङ गरेको थिइन । चोट त ठिक भइसकेको छ । तर अझै पनि घुँडा खुम्चाउदा चसक्क दुख्थ्यो । प्रशिक्षक र फिजियोले रेस्ट गर्न सल्लाह दिनुभयो । त्यसैले अब केही दिनमा घर जाँदैछु । एक महिना पुरा आराम गर्ने योजना छ ।’
बायाँ घुडाको पछाडिको भागको हड्डीमा दुखाई भएपछि उनले दुई साता आराम गर्नुपरेको थियो । त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट घरेलु फुटबल खेल्दा सानो चोट लागेपछि उनले चिकित्सकलाई देखाएका थिए । चिकित्सकको सल्लाहमा उनले आराम गरिरहेका थिए । गत साता उनको घुँडाको पट्टी खोलिएको थियो ।
यो पटक टोलीमा नभएपछि जुनमा यमनसँग हुने खेलमा भने फर्कनेमा नवयुग आशावादी छन् । ‘यो पटक मिलेन । तर अब अर्को पटक पहिला भन्दा पनि फिट भएर फर्कने छु,’ उनले भने,‘म यहाँ रहेपनि फिलिपिन्सविरुद्धको नतिजाका लागि म टोलीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु ।’